Telefaona: 0086 75529372936
DMX tariby taratra fahazavana
DMX tariby tariby tariby DMX
Inona avy ireo antony mahatonga ny loharanom-pahazavana tendren-jiro hitia?
Ny mampiavaka ny loharano hazavana LED: 1. Functionality: Ny loharano hazavana LED sy ny efijery fampiratiana LED dia azo fehezin'ny solosaina handefasana ny mombamomba ny dokam-barotra amin'ny fotoana tena izy, handefa horonantsary fanaovana doka ary hanolo ny atiny fanaovana doka araka izay itiavany azy. Ny seho LED dia manana hig ...
Inona no iraisan'ny jiro mivantana sy ny fantsom-piarovana?
Voalohany, ny fanaparitahana ny hafanana, raha ny tena izy, misy olona maro izay tsy mahatakatra ny famafana ny hafanana amin'ny jiro sy lanterne. Betsaka ny olona mikasika ny akorandriaka. Avy eo na mafana ny akorany na tsia, mazava ho azy, na ny iray amin'izy ireo dia valiny mirindra. Ny valiny farany amin'ny hoe mafana na tsia dia ny mahita ny The ...
Inona avy ireo scenario fampiharana ny jiro tondra-drano LED?
Azontsika atao koa ny miantso jiro LED na jiro LED. Ny jiro tselatra LED dia fehezin'ny puce ao anatiny. Ankehitriny dia misy karazany roa ny vokatra azo isafidianana. Ny iray dia ny fitambaran'ireo puce d'exploitation, ary ilay karazana hafa kosa mampiasa chip iray misy heriny lehibe. Raha ampitahaina izy roa dia milamina kokoa ny teo ...
Ahoana ny fikojakojana isan'andro ny jiro LED?
Raha ny marina, ho an'ny jiro eny an-dalambe LED dia tsy hoe nametraka azy ireo isika ary tsy mila mitantana azy ireo. Ny fikojakojana sy fikojakojana tsy tapaka ihany no afaka miantoka ny fotoana fampiasana maharitra. Ho an'ny jiro jiro LED, diovy ny jiro mandritra ny fampiasana ivelany. Ny lahasa lehibe indrindra dia ny fiatrehana ny vovoka ambonin'ny tany. Ao amin'ny ...
Fa maninona no tokony homarihin'ny marika jiro tariby ity ny fahombiazan'ny loharano maivana?
Ny tena tanjon'ny jiro tariby tarihiny dia ny fanovana ny sarin'ny hotely amin'ny alina, mba ho azo averina endrika sy hatsangana amin'ny alina ny trano, mampiseho ny hatsarana sy ny toetra tsy hita taratra amin'ny antoandro, mba hisarihana mpanjifa bebe kokoa. 1, fahombiazana Tandremo ny efficien ...
Ahoana ny malefaka amin'ny jiro mivantana LED?
Ny jiro linear LED dia ny vatan'ny jiro mofomamy vita amin'ny rindrina LED. Ny fonosana farany sy maivana ary fonosana miorina dia vita amin'ny firaka alimina avo lenta fanerena avo-hafanana mahazaka famehezana silika vita amin'ny tombo-kase, izay tantera-drano sy azo antoka. Ny jiro dia mety ...
Inona no karazana jiro?
Ny loharano maivana LED dia karazana hazavana haingon-trano vaovao, izay famenon-jiro amin'ny hazavana hazavana sy jiro tondra-drano. Jiro marani-tsaina izay afaka manolo ny masontsivana sasany amin'ny efijery fampisehoana izay mahatratra ny vokatry ny teboka sy ny habaka amin'ny alàlan'ny fampifangaroana loko pixel. Ny loharano hazavana LED dia ...
Inona no fitsipika ara-teknikan'ny fanasan-drindrina LED?
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, ny mpanasa rindrina LED dia be mpampiasa amin'ny toerana maro, toy ny fanaovan-jiro amin'ny orinasa sy tranobe orinasa, jiro tranom-panjakana, jiro rindrin'ny tranobe manan-tantara, toerana fialamboly sns; ny elanelam-potoana voakasik'izany dia mitombo hatrany koa. Avy amin'ny...
Inona no fanovana nentin'ny jiro amin'ireo trano ety an-tanàna?
Inona ny tetikasa jiro fanorenana? Inona no fanovana nentin'ny jiro fananganana trano ho antsika? Ao amin'ny tanàna onenan'olona, ​​misakafo, miaina ary mivezivezy, ny trano dia azo lazaina ho taolam-paty sy alina mpandatsa-drà ao an-tanàna, manohana ny fironana sy ny firoboroboan'ny tanàna. Amin'ny maha pa kunci ...
Ny mpifaninana amin'ny vokatra jiro LED-fanaparitahana hafanana?
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-10-22
Tao anatin'ny taona vitsivitsy, miaraka amin'ny fandrosoana haingana amin'ny teknolojia chip LED, ny fampiharana ara-barotra an'ny LED dia nanjary matotra tokoa. Ny vokatra LED dia fantatra amin'ny anarana hoe "loharanom-pahazavana maitso" noho ny habeny, ny fanjifana herinaratra ambany, ny androm-piainana lava, ny famirapiratanana, ny tontolo iainana ...
Famaritana feno momba ny tondro folo ambony amin'ny kalitaon'ny jiro LED?
Ny kalitaon'ny jiro dia manondro raha mahafeno ireo mari-pamantarana jiro toy ny fiasan'ny maso, fampiononana, fahitana ary hatsaran-tarehy ny loharanom-pahazavana. Ny fampiharana marina ny mari-pahaizana momba ny kalitaon'ny jiro dia hitondra traikefa vaovao amin'ny toerana misy anao, indrindra amin'ny jiro LED ...
avy amin'ny admin tamin'ny 20-08-04
Toerana ankehitriny: Jiro Austech> Ivontoeram-baovao> Jiro inona no loharanom-pahazavana LED? Inona no karazana jiro? Ny loharano maivana LED dia karazana jiro haingon-trano vaovao, izay famenon-jiro hazavana hazavana sy jiro tondra-drano. Jiro matanjaka afaka ...
Dj Jiro, Taratra Pixel Light, Fanamboarana taratra jiro tarehin-trano, Jiro amin'ny sehatra, Dj Facade Led Jiro, Fantsona tariby 3d,
Inona avy ireo antony mahatonga ny fahazavana tarihina ...
Inona no mitarika jiro mivantana sy mpiambina t ...
Inona ireo scenario fampiharana amin'ny LED ...
Ahoana ny fikojakojana isan'andro ny tondra-drano LED ...
Fa maninona no tokony hanome ...
Adress: B building, zaridaina Chuangjian, Shiyan, Bao'an, Shenzhen China